Antsohihy : nahitam-pahombiazana ny « Lampogno » | NewsMada
Antsohihy : nahitam-pahombiazana ny « Lampogno »
Notontosaina tany Antsohihy, ny 24 hatramin’ny 27 aogositra lasa teo, ny andiany fahafolo amin’ny “Festival Lampogno”. Raha tsiahivina, hetsika iray enti-mamerina indray ny lanjan’ireo karazana kolontsaina sy soatoavina isam-paritra izy ity ary karakarain’ny fikambanana mitondra izany anarana izany ihany.
“Fahombiazana tanteraka ny Lampogno ary tsy hita taratra akory izay noheverina ho vokatry ny sakantsakana samihafa. Porofon’izany, marobe ireo nandray anjara tamin’ny “carnaval” tamin’ny fanokafana ny hetsika. Miisa 52 ny fikambanana namaly ny antso ka tonga nilahatra”, hoy ny fanazavan’i Jean Rigo, mpanakanto sady mpikarakara ny Lampogno.
Niavaka ity “carnaval” ity, satria nentina nanehoana ny kolontsaina sy ny fomba amam-panao isam-paritra. Niompana tamin’ny lohahevitra hoe “Tamborô” izany. Nisy mihitsy ny fifaninanana ka nibata ny loka voalohany, izay loka omby, ny fikambanam-behivavy Ambalakida.
Tetsy ankilan’izay, tomefy olona ny toerana nanatontosana ny fanapoahana afomanga, tamin’ny fotoana nanokafana ny hetsika, ny 24 aogositra hariva. Toy izany koa ny fampisehoana niarahana tamin’i Dadi Love, izay nentina namarana tanteraka ny Lampogno, ny alahady hariva teo. “Lany tanteraka ny tapakila tamin’io”, hoy i Jean Rigo, izay nampanantena ny hanohizana hatrany ny hetsika.